ဌာနများတွင် ဖောင်းပွနေသည့် ရာထူးများကို လျှော့ချရန်နှင့် ယခင်အစိုးရလက်ကျန် မာစီဒီးကားများကို ခွဲ ဝေမယူဘဲ လေလံတင်ရောင်းချခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတွင်ဘတ်ဂျက်လိုငွေပြမှုကို လျှော့ချသင့်ကြောင်း လွှတ်တော်၌ ဆွေးနွေး | The Myanmar Times - Open Hluttaw
ဌာနများတွင် ဖောင်းပွနေသည့် ရာထူးများကို လျှော့ချရန်နှင့် ယခင်အစိုးရလက်ကျန် မာစီဒီးကားများကို ခွဲ ဝေမယူဘဲ လေလံတင်ရောင်းချခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတွင်ဘတ်ဂျက်လိုငွေပြမှုကို လျှော့ချသင့်ကြောင်း လွှတ်တော်၌ ဆွေးနွေး | The Myanmar Times
Posted on စက်တင်ဘာ 4, 2018 by Open Hluttaw
အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများတွင် ပိုလျှံဖောင်းပွနေသည့် ရာထူးများကိုလျှော့ချပစ်ရန်နှင့် ယခင်အစိုးရလက် ကျန် မာစီဒီးကားများကို ခွဲဝေမယူဘဲ လေလံတင်ရောင်းချခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတွင် ဘတ်ဂျက်လိုငွေပြမှုကို လျှော့ချ သင့်ကြောင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ၅ မှ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရဲထွဋ်က စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည်။
— Read on myanmar.mmtimes.com/news/114928.html
This entry was posted in အမျိုးသားလွှတ်တော်, အထွေထွေ, လွှတ်တော်သတင်းများ. Bookmark the permalink.
← လွှတ်တော်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ကို အယုံအကြည်မရှိဆိုကာ တိုင်းလွှတ်တော်အမတ်တစ်ဦး နုတ်ထွက်စာတင် | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
အစိုးရဌာနများ ဘတ်ဂျက်ကို အမွေခွဲသလိုအပြိုင်အဆိုင်မတောင်းသင့်ဟု လွှတ်တော်အမတ်ဆွေးနွေး | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ →